Shan Nin oo labo gabdhood ku kufsatay Deegaanada Maamulka Puntland oo xukun lagu riday SAWIRO |
Shan Nin oo labo gabdhood ku kufsatay Deegaanada Maamulka Puntland oo xukun lagu riday SAWIRO
Shan Dhalinyaro ah oo dhamaadkii sanadkii hore labo Gabdhood ku kufsaday Degmada Galdoagob Oo Ka Tirsan maamulka Puntland oo mid ka mid ah gabdhaha ka duubay Muuqaal lagu baahiyay baraha Bulshada ayaa maanta xukun lagu riday.
Mid kamid ah dhalinyarada lagu soo eedeeyay in uu ku lug lahaa kufsigan ayaa lagu waayay wax danbi ah sida ay xukmiyeen culumaa’udiinkii ku jiray qaadista dacwad-dan kufsiga la xidhiidha.
1:-Shirwaca Jaamaca Junle waxaa lagu xukumay 200 oo jedel ah,10 Sanno oo xarig ah iyo Ganaax lacageed oo dhan “$4620 Dollar
2:-Yaasir Maahir Xaashi waxaa lagu xukumay 200 oo jedel ah, 8 Sanno oo xarig iyo Ganaax lacageed oo dhan “$3520 Dollar.
3:-Ayaanle Wale Waxaa lagu xukumay 100 jedal ah, 7 Sanno oo xarig ah iyo Ganaax Lacageed oo dhan $2560 Dollar
4 :- Yaxye Awkax,Waxaa lagu xukumay 100 jedel ah, 6 Sanno oo xarig iyo Ganaax lacageed oo dhan $1760 Dollar.
5:-C/risaaq Xoosh Jabriil,100 jedel ah,5 sanno oo xarig ah iyo Ganaax lacageed oo dhan $1760 Dollar.
Sidoo kale,taliyaha Booliska Puntland Erag ayaa warbaahinta u sheegay in dhalinyaradii la xukmay in ay u soo qaadeen Magaalada Garoowe si ay ugu bilaabtoi xabsiga lagu xukumay.
Ugu Danbaytii, dhacdooyinka kufsiga ah ayaa Bilihii danbe ahaa kuwo ku soo noq noqday deegaannada Puntand ,iyadoo wasaarada Haweenka Puntland ay diyaarisay Xeerka Kufsiga Gabdhaha ayna ansixiyeen Baarlmaanka Maamulka Puntland ,kaasoo aanan waxba ka badalin kiisaska kufsiga Gabdhaha ilaa iyo hadda.